Zanu PF faces G40 headache - NewsDay Zimbabwe
NewsDay website ranks first
Rethink country’s education: Murwira
Previous article Undenge trial in false start
Next article India teacher arrested over wedding bomb murder
kupenga mukore uno kunoita toi toi kuitira zanu ndiko kupenga l think when nero wins we need rehabilitaon as a nation
Comment…Siyanayi nezvetoyitoyi izvi zvanga zvapinda muropa. Vanhu vanodiwa nevanhu kuti vave vamiririri vavo vanosarudzwa naX chete. Kwete kuswero ita SLOGAN mukoreuno. Ngadzidzewo veduwe, tisajayirira kushaskwa tichingotengerwa twunodhaka.
Comment…VaMukupe, mayifunga kuti paya pamakapinda muParamende payiva nemakwikwi here? Makangopiwa mundiro yesirivha paya. Zvino ndopane makwikwi, kana pasina zvamakaitira Mabvazuva eguta reHre, hapana hapana
Zvino mapinda munhandare, tambayi nhabvu.